Subxaanallaah : Bisad Alle Baryeysa Si Haweeney Miir-beel Ku Jirtay Uga Baxdo | alcarabiya.com
Home » Sheekooyin » Subxaanallaah : Bisad Alle Baryeysa Si Haweeney Miir-beel Ku Jirtay Uga Baxdo
Subxaanallaah : Bisad Alle Baryeysa Si Haweeney Miir-beel Ku Jirtay Uga Baxdo	Qisadaan ka dhacday dalka Cummaan ayaan door bidnay in bahda alcarabiya.com u soo guurino si ay ugu noqoto cibro qaadasho dhinacyo badan ah .
Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah hooyadiisna ay ku jirtay cisbataalka xilli ay aheyd miir beel ku jirtay(Koomo).
Maalin maalmaha ka mid ah ayay taqaatiirta u sheegeen wiilkaasi in xaaladda hooyadii ay rajo beel tahay isla markaana ay daqiiqad waliba oo soo socotay ay nafta ka bixi karto.
Si qaarabada uu u ugu soo sheego xaaladda maamada ayuu soo tagay hooyadii intii uu soo socday ayuu gaariga is daajistay goob shidaalka laga qaato intii uu sugayay shaqaalaha shidaalka ugu shubi lahaa ayuu cartoon hoostiisa ka arkay bisad(mukulaal) dhashay bisado yar yar isla markaan aan awoodin in ay socdaan, markaas ayuu is weydiiyay toloow yaa cunno u keenaya iyaga oo xaaladdaan ku sugan?
Super Market-ka goobta shidaalka ayuu galay waxa uuna u soo iibiyay gasac kaluun ah (Mallaay) waa uu u furay waa siiyay bisadihii yaraa , markii uu dhameystay ujeedkiisii ayuu ku soo laabtay cisbitaalka markii uu soo gaaray qolkii ay hooyadii ay ku jirray waxa uu arkay in aysan saarneyd sariirta waa uu naxay gacmaha ayuu madaxa saartay.	Wuu soo baxay markaas ayuu kalkaasida weydii aaway Hooyadeey? waxa ay ku tiri xaaladeeda waa soo wanaagsanaantay qol kale ayaan u wareejinay .
Waa uu u tagay waxa uu arkay iyadoo ka baxday miir beelkii(koomadii) waa uu salaamay waxa uuna weydiiyay xaalkeeda markaasi ayay u sheegtay in ay aragtay iyadoo miir beel ku jirta bisad iyo caruureeda oo kor u haya gacmahooda oo u duceeynaya iyada , subaxnaallaah subxaanallaah alle naxariistiisa waa ay balaaran tahay , waa uu yabaay wiilkii .
Subxanalaah , daawooyinka dadka idinka xanuunsan sadaqada waa sadaqada, rasuulkeena CSW waxa uu yiri naarta xittaa uga bad baado cad timir ah , alle SWT waxa uu yiri ” Wa`in Min Shey`in Illaa Yusabix Bixamdihii Walaakin La Tafqahuuna Tasbiixahu”.
Fadlan share si dheh si asxaabta kale ugu noqo cibro qaadasho .
5 Responses to Subxaanallaah : Bisad Alle Baryeysa Si Haweeney Miir-beel Ku Jirtay Uga Baxdo	Firaqo Reply
September 8, 2013 at 12:05 pm	Asc ilah naxaristisa badana alow nodinbi dhaf
August 22, 2013 at 7:54 am	Subxanallah wax walpa wey dhici karaan adunka qadarka Alle waa cajiib.
Abdullahi adan jelle Reply
August 20, 2013 at 5:56 am	Maashaa allah mashaa allah ilaah haa noo dinbidhaf sadaqadana waa wax wanagsan
Yarka maanta Reply
August 19, 2013 at 2:34 pm	Masha allah ilahayow ino inoo dambi dhaaf iyo ilaahayow cafimad tama si anaga iyo dhaman qoyskena iyo inta islam ah amin amin ami
Nuur mxd Reply
August 19, 2013 at 11:48 am	Subxaanalaah
ilaahey dartiis utustiixso usujuud